အာရှကိုခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ မြန်မာဆိုပဲ… – Lawkathuta
သချိုင်းကုန်းက အသားနဲ့ စည်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့..စည်တစ်ခါထုတိုင်း.. မသာတွေများ တန်းစီမလားဗျာ….
ဗိုလ်​ကြီး ကျွန်​​တော်​ သူတောင်းစား မဟုတ်ပါဘူး…
သတင်းဆောင်းပါး March 17, 2018
မြန်မာနိုင်ငံက တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ဒုံး တွေနဲ့ စစ်ရေးပြခဲ့ တော့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေမှာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အာရှကိုခြိမ်းခြောက်လာတဲ့မြန်မာ
မြန်မာ့စစ်အင်အားကို ဒီအတိုင်းထားတော့မှာလားဆိုတဲ့အရေးအသားတွေနဲ့ဖိအားပေးဖို့အနောက် အုပ်စုကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကုလမှာက မြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးယူမယ်ဆိုရင် အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုပ်နဲ့ရုရှားတို့က ဗီဒိုအာဏာသုံးပယ်ချနေတာပါ။
အခုအခြေအနေအရ ရခိုင်အရေးအခင်းကိုအကြောင်းပြပြီး OIC ရဲ့ဖိအားတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးယူဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မြန်မာမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေက ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုင်းငံ့ဖြစ်နေချိန်မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိစ္စဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ သူများနိုင်ငံကို မကျူးကျော်သလိုကိုယ်နိုင်ငံကိုထိပါးလာရင်အရိုး ကျေကျေ အရေခမ်းခမ်းပြန်ချမဲ့တပ်မတော်တစ်ရပ်ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့လည်း ဘယ်နိုင်ငံကိုမှခြိမ်းခြောက်နေတာမဟုတ်သလို ကိုယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ စစ်ရေးပြတာကိုဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်နေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့တပ်မတော်နေ့စစ်ရေးပြမှာ ဘာတွေထပ်တိုးလာမလဲဆိုတာ ကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ခေတ်မီတပ်မတော်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတကာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း လေ့လာသူတွေ သိဖို့လိုလာပါပြီ။
အာကာမိုးတို့တပ်မတော်အနေနဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ်မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့ အင်အားတောင့်တင်းပြီး စွမ်း ရည်ထက်မြက်သောခေတ်မီမျိုးချစ်တပ်မတော် ဖြစ် ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ မှာပဲဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မူရင်း photo crd.
မွနျမာနိုငျငံက တပျမတျောနေ့ စဈရေးပွမှာလကွေောငျးရနျကာကှယျရေး ဒုံး တှနေဲ့ စဈရေးပွခဲ့ တော့ နိုငျငံတကာ မီဒီယာတှမှော စဈလကျနကျပစ်စညျးတှနေဲ့ အာရှကိုခွိမျးခွောကျလာတဲ့မွနျမာ
မွနျမာ့စဈအငျအားကို ဒီအတိုငျးထားတော့မှာလားဆိုတဲ့အရေးအသားတှနေဲ့ဖိအားပေးဖို့အနောကျ အုပျစုကို မီးမောငျးထိုးပွခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကုလမှာက မွနျမာနိုငျငံကိုအရေးယူမယျဆိုရငျ အငျအားကွီးနိုငျငံတှဖွေဈတဲ့တရုပျနဲ့ရုရှားတို့က ဗီဒိုအာဏာသုံးပယျခနြတောပါ။
အခုအခွအေနအေရ ရခိုငျအရေးအခငျးကိုအကွောငျးပွပွီး OIC ရဲ့ဖိအားတှကွေောငျ့ မွနျမာနိုငျငံကိုအရေးယူဖို့အခွအေနတှေဖွေဈသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့မွနျမာမိတျဖကျနိုငျငံတှကေ ကနျ့ကှကျခဲ့တဲ့အတှကျဆိုငျးငံ့ဖွဈနခြေိနျမှာ အရှအေ့လယျပိုငျးကိစ်စဖွဈပျေါ ခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဆိုတာ သူမြားနိုငျငံကို မကြူးကြျောသလိုကိုယျနိုငျငံကိုထိပါးလာရငျအရိုး ကကြေေ အရခေမျးခမျးပွနျခမြဲ့တပျမတျောတဈရပျရှိနပေါတယျ။
မွနျမာတပျမတျောအနနေဲ့လညျး ဘယျနိုငျငံကိုမှခွိမျးခွောကျနတောမဟုတျသလို ကိုယျပွညျတှငျးမှာရှိတဲ့ စဈလကျနကျပစ်စညျးနဲ့ စဈရေးပွတာကိုဘယျသူ့ကိုမှ ဂရုစိုကျနစေရာလိုမယျမထငျပါဘူး။
၂၀၁၈ ခုနှဈ မတျလ ၂၇ ရကျနမှေ့ာပွုလုပျမဲ့တပျမတျောနစေ့ဈရေးပွမှာ ဘာတှထေပျတိုးလာမလဲဆိုတာ ကတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့လိုကျပါ။
ကိုယျနိုငျငံကိုကာကှယျဖို့အတှကျ ခတျေမီတပျမတျောတဈရပျကိုဖှဲ့စညျးဖို့လိုအပျတယျဆိုတာကတော့ နိုငျငံတကာ စဈလကျနကျပစ်စညျး လလေ့ာသူတှေ သိဖို့လိုလာပါပွီ။
အာကာမိုးတို့တပျမတျောအနနေဲ့ နိုငျငံခဈြစိတျမြိုးခဈြစိတျအပွညျ့နဲ့ အငျအားတောငျ့တငျးပွီး စှမျး ရညျထကျမွကျသောခတျေမီမြိုးခဈြတပျမတျော ဖွဈ ရနျဆကျလကျကွိုးစားဆောငျရှကျနေ မှာပဲဖွဈကွောငျး တငျပွလိုကျရပါတယျ။
မူရငျး photo crd.
နိုင်ငံကို ချစ်ကြပါ… တကယ်ချစ်တယ်ဆို ရှဲလိုက်ပါ။
နိုင်ငံကို ချစ်ကြပါ #အစိုးရဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းဆိုတာ အစိုးရအဖွဲ့က ခန့်အပ်လွှာနဲ့ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကို ဆိုလိုပါတယ်။ လခစားဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက ခန့်အပ်ခြင်းမရှိတဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေဟာလည်း နိုင်ငံ့တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေသူများ ဖြစ်တာကြောင့်မို့ သူတို့လည်း ဝန်ထမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လခစားအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေလို ကျင့်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေမှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်နဲ့ …
ကိုးဘွဲ့ဆရာတော်မှ ဦးသန်းရွှေကို တည့်တည့်ပြောပြီ
ပတ္တမြား မျက်ရှင်တော်ဘုရား ပျောက်ဆုးံ ရွှေတိဂုံဘုရား ကိုးဘွဲ့ရဆရာတော်မှ ဦးသန်းရွှေကို တည့်တည့်ပြောပြီ သေ သေ ချာချာဆုံး အောင် ဖတ် ကြည့်ပါ အလွန် အင် မတန် ကြောက် ဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် ပါသန်းရွှေတို့နအဖတွေရဲ့ဘုရားတရား …
ဦးကိုနီိရဲ့သဘောထားတွေပါဝင်သည့် ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေး စာရွက်ဖြန့်ဝေမှု လှိုင်သာယာတွင်ပြုလုပ် —————– ၄.၁.၂၀၁၈ရက်နေ့တွင် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး စာရွက်ဖြန့်ဝေခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ သမကုန်းအဝိုင်းထိပ်နှင့် မီးခွက်ဈေးတို့တွင် ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေဆန့်ကျင်သူများမှ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နေ့လည် ၁၂း၀၀နာရီတွင် လှိုင်သာယာသမကုန်းအဝိုင်းထိပ်တွင် လည်းကောင်း၊ နေ့လည် ၁း၀၀နာရီတွင် လှိုင်သာယာမီးခွက်ဈေးတွင် လည်းကောင်း ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေး ပန်းဖလက် …
မြန်မာ့တပ်မတော်၏စစ်အင်အားနှင့် ကမ္ဘာ့လက်ရှိ စစ်တပ်အင်အားအဆင့်အတန်းနိုင်ငံသားတိုင်းသိသင့်သော မိမိတိုင်းပြည်၏ စစ်အင်အား
မြန်မာ့တပ်မတော်၏စစ်အင်အားသိချင်သူများအတွက် ထပ်မံပြန်လည် မျှဝေပါသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း126 နိုင်ငံတွင်အဆင့်15 ရှိမြန်မာ့တပ်မတော်မှတိုက်ပွဲဝင်စစ်သည် အင်အား 406000 ဦး( မှတ်ချက်။ ။ထိုစစ်အင်အားမှာအရံစစ်အင်အားဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအမျိုးသမီးစစ်သည်ရဲမေများမပါဝင်ပေ။ )နိုင်ငံပေါင်း126 နိုင်ငံတွင်ကမ္ဘာ့အဆင့်33 ရှိတိုက်လေယာဉ်များ… MIG 29 MIG 21 ပုံစံတူ F 7- 2K K 8 JF …
ပိတ်​ခြင်​သ​လောက်​ပိတ်​ ဂရုမစိုက်​​သော မြန်​မာ
ပိတ်​ခြင်​သ​လောက်​ပိတ်​ ဂရုမစိုက်​​သော မြန်​မာ **************** ​USA အ​မေရိကန်​နှင့်​ အင်္ဂလန်​အပါအဝင်​ အ​နောက်​အုပ်​စု ကုလ၊ UN. OIC UAE. စသည်​ နိုင်​ငံများနှင့်​ ယုတ်​မာ​ကောက်​ကျစ်​​သောကုလား ဩဇာခံ အဖွဲ့အစည်းများကို ဟိုလွန်​ခဲ့​သော နှစ်​​ပေါင်းများစွာကတည်းက ပြည်​​ထောင်​စု မြန်​မာနိုင်​ငံ ကြီးသည်​ ​စောက်​ဂရုကိုမစိုက်​တာပါ၊ အ​ရေးယူ အ​လေးမူ​သော …
မွေးရပ်မြေ တစ်ရွာလုံးကို တိုက်တွေ ဆောက်ပေးပြီး ကျေးဇူးဆပ်လိုက်တဲ့ သူဌေးကြီး
သေရေးရှင်ရေး ကြုံနေရတာတောင် စည်းကမ်းရှိနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေး..
လူမှုကွန်ယက်မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဆရာလေးဆီက ဓာတ်လုံးရရှိသွားတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ ဗီဒီယို
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ကောင်မလေးတစ်ယောက် တို့ဆေး ထပ်မိပြန်တယ်
လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ..တစ်လလုံးမှာ …